ईन्दिरादेखि सन्दिपसम्मको शुभ यात्रा साँझ, अरु को-को छन् ? « Ramailo छ
ईन्दिरादेखि सन्दिपसम्मको शुभ यात्रा साँझ, अरु को-को छन् ?
प्रकाशित मिति : Oct 25, 2017
गृष्म ईन्टरटेनमेन्टले आउँदा अक्टुवर २२ तारिखमा दुबईमा ‘शुभ यात्रा साँझ’ गर्ने भएको छ । यस साँझमा गायक रामकृष्ण ढकाल, गायिका ईन्दिरा जोशी, गायक हेमन्त राणा, नायिका नम्रता सापकोटा र कलाकार सन्दीप क्षेत्री सहभागी हुँदैछन् ।
बुधबार प्रेसमिट गर्दै गृष्मका प्रमुख गेहेन्द्र घिमिरेले दुबईको साँगीतिक साँझ बारे जानकारी गराए । गेहेन्द्रका अनुसार उक्त साँझबाट उठेको रकमको केही प्रतिशत भाग अनाथ बालबालिकको सहयोगमा लगाइनेछ । विभिन्न देशमा कार्यक्रम गरिसकेका गेहेन्द्रले दुबईको कार्यक्रम पनि सफल हुनेमा विश्वसा व्यक्त गरे । यता ईन्दिरा, हेमन्त, सन्दिप र नम्रताले दुबईमा रहेका दर्शकले उक्त साँगीतिक साँझमा सहभागी हुन आग्रह गरे ।
ईन्दिराले आफुले त्यहाँका दर्शकको लागि विशेष प्रस्तुत दिने बताइन् भने हेमन्तले साइँली विशेष हुने बताए । कलाकार क्षेत्रीले आफ्नो प्रस्तुती अति नै रमाईलो हुने बताउँदा नम्रताले पनि आफ्नो नृत्य प्रस्तुती खास हुने बताइन् । प्रेसमिटमा गायक ढकाल भने उपस्थित थिएनन् ।